Ibhodi yoKhenketho yase-Afrika "i-Afrika enye" ​​ngoku ineeNdlebe eziVulekileyo kuLuntu lwaseMpuma Afrika
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » IBhodi yezoKhenketho yaseAfrika » IBhodi yezoKhenketho yase-Afrika "i-Afrika enye" ​​ngoku ineeNdlebe eziVulekileyo kuMphakathi wase-Afrika eseMpuma
IBhodi yezoKhenketho yaseAfrika • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba zikaRhulumente • Utyalo mali • iindaba • abantu • Ukwakha kwakhona • Iindaba zaseTanzania eziziiNdaba • Tourism • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • komzila Ngoku • I-WTN
IBhodi yezoKhenketho yase-Afrika "i-Afrika enye" ​​ngoku ineeNdlebe eziVulekileyo kuMphakathi wase-Afrika eseMpuma
IBhodi yezoKhenketho yase-Afrika iyaphumelela kwiphulo layo lokudibanisa iindawo zokhenketho zase-Afrika kunye nokwazisa ilizwekazi okanye imimandla yelizwekazi njengendawo enye yokhenketho.
Amazwe angamalungu oLuntu lwaseMpuma Afrika ngoku ayasebenzisana ukuthengisa ukhenketho njengebhlogi ngomboniso osandul 'ukumiselwa wonyaka wezokhenketho wengingqi, ngenjongo yokunyusa inani labakhenkethi abatyelele le ngingqi emva kwentshabalalo ye-COVID-19.
The IBhodi yezoKhenketho ye-Afrika (i-ATB) bathathe inxaxheba kumboniso wokuqala wokhenketho wengingqi wamazwe angamalungu eMpuma Afrika.
Usihlalo we-ATB uMnu Cuthbert Ncube ube negalelo kumboniso wokuqala wezokhenketho wengingqi ye-Mpuma Afrika (EARTE) ophele kwiveki ephelileyo emva kweentsuku ezintathu zeshishini.
U-Cuthbert Ncube, usihlalo we-ATB uvakalise ngexesha u-EAmazwe angamalungu e-African Community (EAC) bathathe inyathelo elilungileyo lokujolisa kwi-ajenda yase-Afrika ukubona i-EAC njengebhloko edibanisa izandla kwindlela ebandakanyayo nelungelelanisiweyo yokuphuhlisa uKhenketho lwase-Afrika.
UMbutho woLuntu lwaseMpuma Afrika (i-EAC) ngumbutho woorhulumente bamazwe angama-6: amaRiphabhlikhi aseBurundi, eKenya, eRwanda, eSouth Sudan, kwiRiphabhlikhi yase-Tanzania naseRiphabhlikhi yase-Uganda, ikomkhulu layo lise-Arusha, eTanzania.
Uthe i-ATB izakusebenza ngokusondeleyo namalungu e-EAC ukuphucula ukukhula ngokukhawuleza kwezokhenketho lwengingqi kwi-bloc.
UMongameli wase-Zanzibar uGqirha Hussein Mwinyi utyhile isibetho sokuphehlelela uMboniso wezoKhenketho weNgingqi ye-Mpuma ye-Afrika (EARTE) oza kujikeleza phakathi kwelungu ngalinye lelungu le-EAC.
Ugqirha Mwinyi uthe amazwe angamaqabane e-EAC kufuneka achaze ngokutsha kwaye aqwalasele kwakhona imigaqo-nkqubo ethothisa ukuphuhliswa kokhenketho kulo mmandla ukulungiselela iimveliso kunye neenkonzo ezifanayo zabakhenkethi.
Ukusungulwa kwe-EARTE yonyaka kuya kuvula iindlela ezintsha kwingingqi ye-EAC kwaye kuphonononge iindlela kunye neendlela ezintsha eziza kuthengisa lo mmandla njengendawo enye, utshilo uMwinyi.
Izilwanyana zasendle, iimpawu zendalo kubandakanya iintaba, ulwandle kunye namanxweme, indalo, kunye neendawo zembali zezona ndawo zikhokelayo kubakhenkethi ezitsala uninzi lwabakhenkethi bamanye amazwe nabengingqi kwingingqi ye-EAC.
Ukuthintelwa kokuhamba kunye nokukhutshwa kwee-visa, ukunqongophala kokulungelelanisa phakathi kwengingqi ye-EAC bekukuthothisa ukukhula kwezokhenketho lwengingqi.
Amazwe angamaqabane e-EAC kufuneka abuyele kwiibhodi zawo zokuzoba ukuze asindise icandelo lezokhenketho ngokukhawulezisa ukuqukunjelwa kweNkqubo ye-EAC yoKhenketho noLawulo lweZilwanyana zasendle, ekomelezeni ukuHanjiswa kweendawo zokuhlala zoKhenketho, amalungu eNdlu yoWiso-mthetho ye-Mpuma Afrika ( U-EALA) ucebise oorhulumente be-EAC.
Ukunqongophala kwendlela yokunxibelelana yolwazi elungelelanisiweyo neyenziwe ngekhompyutha yokuphuhlisa ii-visa zabakhenkethi ezidibeneyo kuchaphazele kakhulu uphuhliso lokhenketho lommandla, ubukhulu becala ngexesha lobhubhane we-COVID-19.
Unobhala Jikelele we-EAC uGqirha Peter Mathuki uthe ukufika kwabakhenkethi bamanye amazwe kwingingqi ye-EAC bekonyuke ngokuthe ngcembe ngamazinga ohlukeneyo kwilizwe ngalinye. Yayifikelela kwi-6.98 yezigidi kwi-2019 ngaphambi kokuqhambuka kwesibetho se-COVID-19.
Inani labakhenkethi abafika kummandla we-EAC lehle malunga neepesenti ezingama-67.7 kunyaka ophelileyo (2020) ukuya malunga nezigidi ezi-2.25 zabakhenkethi bamazwe aphesheya, belahlekelwe zizidola zaseMelika i-4.8 yezigidigidi kwimali yabakhenkethi.
Ummandla we-EAC ngaphambili wawuqikelele ukutsala abakhenkethi abazizigidi ezili-14 ngo-2025 ngaphambi kokuba kuqhambuke ubhubhane we-COVID-19.
Ukuphuhliswa kweepakeji zokhenketho kwiindawo ezahlukeneyo kunye namathuba otyalo-mali lokhenketho kunye nenkuthazo, ukulwa nokuzingela ngokungekho mthethweni kunye norhwebo lwezilwanyana zasendle ngokungekho mthethweni zezona ndlela zingundoqo ekufuneka zenziwe kuphuhliso lokhenketho lommandla, utshilo uGqirha Mathuki.
Ukuqhambuka kwe-COVID-19 kuchaphazele kakubi izibonelelo zokhenketho ngemisebenzi emikhulu kunye nengeniso, kukwajongela phantsi imizamo yolondolozo lwezilwanyana zasendle ngenxa yokuncitshiswa kwemirhumo eqokelelwa kwiindwendwe ziiPaki zeSizwe kunye neendawo zelifa lemveli.
Izithintelo zokuhamba kubakhenkethi abanqumla imida ye-EAC zichaphazele ukhenketho olunqumla imida, emva koko bathintela ukuhamba kwabakhenkethi bamazwe kunye nabengingqi ukungena kumazwe angabamelwane, ubukhulu becala iKenya neTanzania ezinokwabelana okufanayo.
Ukuphendula lo bhubhani, i-EAC Secretariat iphuhlise isiCwangciso sokuBuyisa uKhenketho esiya kuthi sikhokele lo mmandla ekubuyiseleni ukhenketho kwinqanaba laphambi kobhubhane.
Amazwe angamalungu aseMpuma Afrika abelana ngokhenketho kunye nezilwanyana zasendle njengezixhobo eziqhelekileyo ngokuhamba kwemida yezilwanyana zasendle, abakhenkethi, abakhenkethi, iinkampani zeenqwelo moya kunye nabanini beehotele.
IMount Kilimanjaro, iSerengeti ecosystem, iMkomazi, neTsavo National Parks, iilwandle zoLwandlekazi lwaseIndiya, iitshimpanzi kunye neepaki zegorila eNtshona Tanzania, eRwanda, naseUganda zizinto eziphambili nezikhokelayo kwimithombo yokhenketho yengingqi ekwabelwana ngayo phakathi kwamazwe angamalungu e-EAC.
Ibhunga lezokhenketho kunye nabaphathiswa bezilwanyana zasendle bavumile nge-15 kaJulayith kulo nyaka, umboniso wezokhenketho wengingqi ye-EAC (i-EARTE) oza kubanjwa ngamazwe asebenzisana nawo ngokujikeleza.
I-Tanzania yonyulwa ukuba isingathe i-EARTE yokuqala ngomxholo othi "UkuKhuthazwa koKhenketho oluQinisekayo loPhuhliso loQoqosho oluBandakanyayo." Umboniso uvaliwe kwangoko kwiveki ephelileyo.